संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका तर होम-क्वारेन्टाइन बस्न नसक्नेलाई सरकारले नै राख्ने ! « Online Tv Nepal
संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका तर होम-क्वारेन्टाइन बस्न नसक्नेलाई सरकारले नै राख्ने !
Published : 27 March, 2020 9:37 am
कोरोना भाइरस लागेको पुष्टि भएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएका तर ‘होम-क्वारेन्टाइन’ मा बस्न नसक्नेहरूका लागि सरकारले बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन्। ‘जसलाई संक्रमित व्यक्तिसँग भेटेको छु भन्ने लाग्छ, तर होम-क्वारेन्टाइनमा बस्न सम्भव छैन भने सरकारले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेछ,’ मन्त्री योगेश भट्टराईले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले होम-क्वारेन्टाइनमा बस्न एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यो पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने उनीहरूलाई सरकारले नै क्वारेन्टाइनमा राख्छ।’
होम-क्वारेन्टाइनमा बस्नेले अलग्गै खानपिन गर्ने, परिवारका सदस्यसँग दुरी कायम राख्ने, अलग्गै शौचालय प्रयोग गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिने लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। सबैका घरमा यी सुविधा नहुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले नै क्वारेन्टाइनमा बस्न सुविधा दिने मन्त्री भट्टराईले बताए।
यसनिम्ति नर्स र चिकित्सकको व्यवस्था भएको र एम्बुलेन्सको सुविधासमेत हुने गरी क्वारेन्टाइन बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ। त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा बेडहरूबीच दुरी कायम हुनुपर्ने, अलग्गै शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन हुनपर्नेसमेत भनिएको छ।
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिए तत्काल अस्पताल लैजाने व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। विदेशबाट आएकालाई समेत सरकारले विभिन्न तरिकाले खोजिरहेको पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए।
‘विदेशबाट आएकाहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई अलग्गै राख्न हामीले खोजी गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘कति व्यक्ति आफैं सम्पर्कमा आएका छन् भने कतिलाई खोजेर पनि ल्याएका छौं।’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्भव भएजति क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाउन भनिएको उनले जानकारी दिए।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री भट्टराईका अनुसार विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाउने क्रम जारी छ। अहिले पनि खरिपाटीमा १ सय ५० जना मान्छे क्वारेन्टाइनमै छन्।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न होटल, स्कुल, रिसोर्ट र सरकारी भवनमा क्वारेन्टाइन स्थल बनाइरेहका छौं। त्यसले पनि पुगेन भने सार्वजनिक ठाउँमा पाल र टेन्ट राखेर पनि गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने।